Jesosy: ny toky - Fiangonan'Andriamanitra Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01 > Jesosy: ilay fampanantenana
Milaza amintsika ny Testamenta Taloha fa noforonina araka ny endrik’Andriamanitra isika olombelona. Tsy ela akory dia nanota isika olombelona ka noroahina hiala amin’ny Paradisa. Fa niaraka tamin'ny teny fitsarana dia tonga ny teny fampanantenana. Hoy Andriamanitra: “Hampifandrafesiko ianao (Satana) sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany; Izy (Jesosy) hanorotoro ny lohanao, ary ianao hanindrona azy (Jesosy) amin’ny ombelahin-tongony »(1. Mosesy 3,15). Nisy mpanafaka ny taranak’i Eva ho avy hamonjy ny olona.
Tsy vahaolana hita maso
Mety nanantena i Eva fa ny zanany voalohany no ho vahaolana. Saingy tao anatin'ny olana i Kaina. Niely ny fahotana ka niharatsy. Nisy fanavotana ampahany tamin'ny andron'i Noa, saingy nitohy ny ota. Nisy ny fahotan'ilay zafikelin'i Noa sy ny an'i Babylona. Ny olombelona dia nanohy nanana olana ary nanantena zavatra tsara kokoa, saingy tsy afaka nahatratra izany mihitsy.
Ny fampanantenan-tena sasany dia natao tamin'i Abrahama. Saingy maty izy talohan'ny nahazoany ny fampanantenana rehetra. Manan-janaka izy nefa tsy firenena ary tsy fitahiana ho an'ny firenena rehetra izy. Natolotra an'i Isaka ary ny fampanantenany tamin'i Jakoba ilay fampanantenana. Nankany Ejipta i Jakoba sy ny fianakaviany ary tonga firenena lehibe, nefa nogadraina izy ireo. Na izany aza, dia nitandrina ny teniny Andriamanitra. Nentan'Andriamanitra nivoaka avy tany Ejipta tamin'ny fahagagana lehibe izy ireo. Ny firenen’Israely dia nanohy hatrany tao anatin’ilay fampanantenana. Tsy nisy fahagagana, toy ny kely fotsiny ny fitandremana ny lalàna. Nanota izy ireo, nisalasala, nirenireny tany an'efitra nandritra ny 40 taona. Nahatoky tamin'ny fampanantenany Andriamanitra ary nitondra ny vahoaka ho any amin'ny tany Kanana ary tamin'ny fahagagana maro dia nomeny azy ireo ny tany.
Mbola olona nanota ihany izy ireo, ary ny bokin'ny mpitsara dia mampiseho amintsika ny fahotan'ireo vahoaka, satria mbola tao anatin'ny fanompoan-tsampy foana izany. Ahoana no fomba nitondrany fitahiana ho an'ny firenena hafa? Farany, Andriamanitra dia nanana ny foko avaratra ny Isiraely ary nalain'ny Asyrianina. Nieritreritra ianao fa mety hampiverina ny Jiosy, saingy tsy izany no izy.
Navelan'Andriamanitra ho babo tany Babylona nandritra ny taona maro ny Jiosy, ary vitsy kely tamin'izy ireo no niverina tany Jerosalema taorian'izay. Ilay firenena jiosy dia lasa aloky ny fiainany taloha. Tsy tsara lavitra izy ireo tany amin'ny tany nampanantenaina toy ny tany Ejipta na Babylona. Nieritreritra izy ireo hoe: Aiza ny fampanantenan'Andriamanitra an'i Abrahama? Fomba ahoana no hahatonga antsika ho jiro ho an'ireo firenena? Ahoana no hahatanterahan'ny fampanantenan'i Davida raha tsy afaka mifehy ny tenantsika isika?
Tao anatin'ny fitondrana Romana dia diso fanantenana ny olona. Nisy ny namoy fanantenana. Ny sasany kosa nanatevin-daharana ny fanoherana ny tany. Ny hafa kosa niezaka ny ho mpivavaka kokoa sy mankasitraka ny fitahian'Andriamanitra.
Nanomboka nanatanteraka ny fampanantenany tamin’ny zaza tsy manambady Andriamanitra. “Indro, hisy virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela, izany hoe, raha adika, Andriamanitra momba antsika.” 1,23) Nantsoina hoe Jesosy izy tamin’ny voalohany - tamin’ny anarana hebreo hoe “Yeshua”, izay midika hoe hamonjy antsika Andriamanitra.
Nilaza tamin’ny mpiandry ondry ny anjely fa teraka tao Betlehema ny Mpamonjy (Lio 2,11). Izy no Mpanavotra, nefa tsy namonjy na iza na iza tamin’izay fotoana izay. Tsy maintsy novonjena mihitsy aza izy, satria tsy maintsy nandositra ny fianakaviana mba hamonjena ilay zaza tamin’i Heroda Mpanjakan’ny Jiosy.
Tonga tamintsika Andriamanitra satria nitandrina ny teny fikasany ary izy no fototry ny fanantenantsika. Ny tantaran'ny Isiraely miverimberina mampiseho fa tsy mandeha ny fomba olombelona. Tsy ho vitantsika samirery ny tanjontsika. Andriamanitra dia mihevitra fiandohana kely fotsiny, fa tsy fanatanjahan-tena, fa fandresena amin'ny fahalemena fa tsy hery.
Rehefa nomen'Andriamanitra an'i Jesosy isika dia nahatanteraka ny fampanantenany ary nitondra izay rehetra nambarany mialoha.
Fantatsika fa nitombo Jesosy mba hanolotra ny fiainany ho avotra noho ny fahotantsika. Mitondra famelan-keloka ho antsika Izy ary izy no fahazavan'izao tontolo izao. Tonga Izy mba handresy ny devoly ary ny tenany amin'ny alàlan'ny fandreseny azy taorian'ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty Hitantsika ny fomba nanatanterahan'i Jesosy ny fampanantenan'Andriamanitra.
Mahita zavatra betsaka lavitra noho ny jiosy efa ho 2000 taona lasa izay isika, saingy mbola tsy nahita ny zava-drehetra. Tsy mbola hitantsika ny zava-drehetra nampanantenaina. Tsy hitantsika hogadrain'i satana izay tsy ahafahany mitarika olona. Mbola tsy hitanay hoe mahalala an'Andriamanitra avokoa ny rehetra. Mbola tsy hitantsika ny fiafaran'ny fitomaniana sy ny ranomaso, fahafatesana sy fahafatesana. Mbola maniry ny valiny farany isika. Ao amin'i Jesosy dia manana fanantenana sy fiarovana isika.
Izahay dia manana fampanantenana izay avy amin'Andriamanitra, izay notohanan'ny zanany lahy ary nofehezin'ny Fanahy Masina. Mino izahay fa ny zavatra rehetra nampanantenaina dia ho avy ary hanatanteraka ny asa natombony i Kristy. Manomboka mamokatra ny fanantenantsika ary matoky isika fa ho tanteraka ny fampanantenana rehetra. Rehefa nahita fanantenana sy fampanantenana famonjena amin'ny zaza Jesosy isika, dia manantena fanantenana sy fahatanterahana amin'ny fahatanterahana ao amin'ny Jesosy nitsangana. Izany dia mihatra amin'ny fitomboan'ny fanjakan'Andriamanitra ary amin'ny asan'ny Fiangonana amin'ny olona tsirairay ihany koa.
Manantena ny tenantsika
Rehefa mino an'i Kristy ny olona dia manomboka mivoatra ny asany ao aminao. Jesosy nilaza fa tokony ho teraka indray isika rehetra.Raha mino azy isika, ny Fanahy Masina dia manalavitra antsika ary mamorona fiainana vaovao ao amintsika. Araka ny nampanantenain'i Jesosy dia tonga ao amintsika izy. Nisy olona nilaza indray mandeha hoe: "Jesosy afaka nateraka arivo arivo; ary tsy hahasoa ahy raha tsy ateraka amiko".
Afaka nijery ny tenantsika isika ary nieritreritra hoe: "Tsy hitako eto intsony. Tsy dia tsara lavitra noho ny 20 taona lasa izay aho. Mbola miady amin'ny ota, ny fisalasalana ary ny fanamelohana aho. Mbola tia tena sy mafy loha aho. amin'ny maha-olona araka an'Andriamanitra araka ny fomban'andriamanitra teo aloha. Manontany tena aho raha tena manao zavatra tokoa Andriamanitra eo amin'ny fiainako.
Ny valiny dia ny fahatsiarovana an'i Jesosy. Ny fanombohantsika ara-panahy dia toa tsy dia tsara izao, fa satria Andriamanitra milaza fa tsara. Ny ananantsika ao dia fandoavam-bola fotsiny. Fiandohana izany ary antoka avy amin'Andriamanitra mihitsy. Ny Fanahy Masina ao anatintsika dia fandoavana ambany ny voninahitra ho avy.
Lazain'i Lioka amintsika fa nihira ny anjely rehefa teraka i Jesosy. Fotoana fandresena izany, na dia tsy toy izany aza ny olona. Fantatry ny anjely fa azo antoka ny fandresena satria nasain'Andriamanitra azy ireo.
Nilaza i Jesosy fa faly ny anjely rehefa mibebaka ny mpanota iray. Mihira ho an'ny olona rehetra mino an'i Kristy izy ireo satria teraka ny zanak'Andriamanitra. Izy hikarakara antsika. Na dia tsy lavorary aza ny fiainantsika ara-panahy, dia mbola hiasa ao anatintsika Andriamanitra mandra-pahavitan'ny asany ao anatintsika.
Tahaka ny misy fanantenana lehibe ao amin'i Jesosy zazakely dia misy fanantenana lehibe amin'ny zaza kristiana vao teraka. Na manao ahoana na manao ahoana ny maha-kristiana anao dia misy fanantenana lehibe ho anao satria efa nametraka tao aminao Andriamanitra. Tsy hanajanona ny asa natombony izy. Porofo i Jesosy fa mitandrina ny teniny foana Andriamanitra.